मेयरमा जित पक्का भएपछि कलाकार समेत रहेका बालेनले सार्वजनिक गरे बक्तब्य - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper मेयरमा जित पक्का भएपछि कलाकार समेत रहेका बालेनले सार्वजनिक गरे बक्तब्य	मेयरमा जित पक्का भएपछि कलाकार समेत रहेका बालेनले सार्वजनिक गरे बक्तब्य - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper मेयरमा जित पक्का भएपछि कलाकार समेत रहेका बालेनले सार्वजनिक गरे बक्तब्य
मेयरमा जित पक्का भएपछि कलाकार समेत रहेका बालेनले सार्वजनिक गरे बक्तब्य
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा जित पक्का भएपछि बालेन्द्र शाहले भने– परिणामलाई जित–हारको रुपमा नहेरौं विजयी जुलुस नगरौं, र अरुलाई पराजित भन्ने संकेत सम्म नगरौं । आफू रहेकै ठाउँमा धन्यवार्द याली गरौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र साहले निर्वाचनको परिणामलाई जित–हारको रुपमा नहेर्न अपील गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्– ‘जितहारलाई मतगणना सकिएसँगै सकिदिऊँ । घोषणापत्रमा भएका कुराहरू लागु गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय उत्सव मनाउँला’ ‘अहिले विजय जुलुस भनेर अरुलाई पराजित भन्ने संकेतसम्म पनि नगरौं।’
उनले बक्तव्यमा भनेका छन्, ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा हामीलाई मत दिने, समर्थन गर्ने तथा निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने सबैलाई धन्यवाद छ । अहिले यति भन्न सकिन्छ कि, हामी काठमाडौं महानगरको जिम्मेवारी बोक्न योग्य छौं भनेर महानगरका मतदाताहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ । यहाँ विश्वासको कुरा छ । विश्वासमा जित वा हार हुँदैन ।’
ठाउँठाउँबाट विजर्य यालीका नाममा काठमाडौं आउने तयारी भएको सुनिएको भन्दै उनले काठमाडौं आउने ‘दुःख नगर्न’ आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसको स्वामित्व हरेक नेपालीले जहाँबाट जसरी पनि लिइदिए हामी खुसी हुनेछौं ।’
उनले बरु आ९आफ्नो ठाउँबाट धन्यवार्द याली गर्न आग्रह गरेका छन् । आफ्नो अभियानलाई उनले नेपालभरको अभियान बनाउन आग्रह गरेका छन् ।